Ogaden News Agency (ONA) – Waxaan Ogayn Manaloo Sheegay .. Mashaariicda aan Jirin iyo Xasuuqii Shacabka iyo DDSPOST
Waxaan Ogayn Manaloo Sheegay .. Mashaariicda aan Jirin iyo Xasuuqii Shacabka iyo DDSPOST
Posted by ONA Admin	/ January 14, 2015
Horey ayaan u ogayn in dhiigyacabkii bakhtiyay ee Cabi Iley aabihii ahaa, Meles Zinawi, in inuu u yeedhiyay Cabdi Iley habkuu kula dagaalami lahaa jabhadda ONLF. Barnaamijkaa wuxuu ka kobnaa laba. Mid Gudaha ku wajahan iyo mid Dibadda loogu talagalay. Labadii barnaamij ee loo wakiishay Cabdi Iley siduu isagu dan mooday ayuu u fuliyay ugana faa’idaystay.
Waxay hadda ka hor noo sheegeen dhalinyaradii kasoo baxsatay maleesiyada Hawaarinta ee Shambal Faysal Cabdiweli oo ka mid ahaa ciidankii ugu horeeyay ee la xareeyo, waxay noo sheegeen inuu Cabdi Iley kula dardaarmay inay Ragga laayaan (Xabbad ku hanuuniyaan), Haweenkana kufsadaan. Arintaasi waxay ahayd mid ay heshiis ku ahaayeen Cabdi Iley iyo maamulka Itobiya oo markaa uu Meles hogaaminayay. Hasa ahaatee sida aan hadda ka akhrinayno xogaha ay soo warinayaan shabakadaha gudaha (Xafiiska/Guriga Cabdi Iley laga soo qorayo), wuxuu Cabdi Iley u fuliyay hab ah inuu dagaal sokeeye ka dhex rido beelaha qaarkood.
Xasuuqa uu Cabdi Iley iyo kooxda uu soo urursaday ay ku fuliyeen shacab masaakiin ah oo warmooge ahaa oo shabakaddaa ay qortay tusaale ahaan waxaad Riixdaa:
Rumayso ama ha rumaysan, dhacdadii Gunagado
Liiska Qaar Ka Mida Dadkii Lagu Laayey Degmada Dhuxun 2002 Ilaa 2003
Barnaamijka kale ee dhiigyacab Meles uu kula dardaarmay cabdi Iley iyo Sirdoonka/Saraakiisha Wayaanaha ee ku sugan Ogadenya waxay ahayd in laga bilaabo gobolka waxay ugu yeedheen mashaariic horumarineed oo aad looga xayaysiiyo dhamaan TV-yada ku hadla Afka Somaliga, ilaa ay ka dhaadhacdo dadka qurba joogta ah inay jiraan mashaariicdaa oo iyagoo jibaysan ay dalka ugu soo qulqulaan. Sidii ayay u dhacday. Waa la xayaysiiyay, ilaa siday noo sheegeen wariyayaashii iyo sawir qaadayaashii ka qaybgalayay arimahaa in gurno meel laga dhisay oo lagu magacaabayo Dugsi, dhowr jeer oo kala duwan la sawiro oo kolba lagu sheego inay tahay degmo gaar ah. Arimahaasi inbadan oo ka mid ah dadkii qurba-joogta ahaa ee kasoo noqday ayaa iyaguma indhahooda kusoo arkay.
Hasa ahaatee qasnada Itobiya Miisaaniyad badan ayaa arintaa kaga baxday oy ka aamusnaayeen iyagoo ogsoon inay been tahay oo Cabdi Iley iyo Jananada la jooga iyo kooxda u nacamlaysa ay qaadanayaan. Sababta waxay ahayd iyagoo ka raja qabay in muddo gaaban ay kusoo afjarmi doonto Halganka ka socda Ogadenya, ka dibna lala xisaabtami doono ama lagu dalacsiin doono Cabdi Iley.
Maqaaladii xiisaha lehee ay ka qoreen boobka hantida shacabka iyo mashaariic beenaadka loogu talagalay dacaayadda waxaa ka mid ahaa:
Mashaariic Aan Laqabaninba iyo Kuwa Aan Ladhamaystirin Oo Maalin Kasta Dadka Lagu Hafro.
Cabdi Ilay oo Warbaahinta caalamka, inta Afka somaaliga ku hadasha laaluushay
Waxaa hubaal ah inay Itobiya ku fashilantay barnaamijyadii loogu tlagalay in halganka shacabka S.Ogadenya lagu hagaasiyo ama shacabka taageera halganka lagu jahawareeriyo.